> Resource> iPod> otú nyefee Music si iPod ịkpọgharịa ka iPod aka
"M nwere m ịkpọgharịa maka a ọtụtụ afọ na music synced na m kọmputa dị n'ụlọ. M nnọọ zụrụ iPod aka ma synced na ọrụ kọmputa. Achọrọ m nyefee songs si ịkpọgharịa n'ọbá akwụkwọ gaa iPod aka. A pụrụ isi mere na-enweghị kpamkpam adịkwa ihe niile na iPod emetụ? "
Mgbe na-abịakwute music nyefe si iPod ịkpọgharịa ka iPod aka, iTunes nwere ike ịbụ onye mbụ na mgbukepụ gafee gị n'uche. Na-Frank, iTunes pụrụ ime ka ọ bụ naanị mgbe niile music na gị iPod ịkpọgharịa bụkwa na iTunes n'ọbá akwụkwọ. Otú ọ dị, nke a nwekwara enwe gị site na a oké mfu, n'ihi na iTunes ga-ewepụ niile music na iPod aka tupu syncing ọhụrụ songs na ya. Ka njọ, ihe adịghị mgbe niile-eme otú ahụ. Chere ị na-ezute a kọmputa okuku ma ọ bụ iTunes reinstallation, ndị niile music, gụnyere ndị jidere si internet, na iPod ịkpọgharịa ga-aghọ mbụ. Mgbe nke a mere, ị na-agaghị ekwe na-eji iTunes ime music mmekọrịta.
Echegbula. Dị nnọọ gị uwe elu on. Iji nyefee music si iPod ịkpọgharịa ka iPod aka, i nwere ike na-amalite na Wondershare TunesGo. Ọ na-mere maka ebufe ma na-ahazi music, videos, photos na ndị ọzọ na gị iPod aka na iPod ịkpọgharịa. Ndị na-esonụ nduzi ga-egosi gị otú nyefee songs si iPod ịkpọgharịa ka iPod aka. Ị nwere ike lelee nduzi.
Cheta na: Lelee akwado iPod aka na iPod ịkpọgharịa ebe a tupu apụ na nduzi.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod aka na ịkpọgharịa na kọmputa
Gbaa ndị Wondershare TunesGo na jikọọ na gị ma iPod aka na iPod ịkpọgharịa na kọmputa site na iji USB cables. Nke a software ga chọpụta abụọ iPods na-egosi ha Ama ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Paghaa music si iPod ịkpọgharịa ka iPod aka
Abịa ekpe sidebar, na pịa Media button n'okpuru gị iPod ịkpọgharịa udi. Pịa Music button na-egosi music management window.
Họrọ songs na ị na-aga nyefee iPod aka. Pịa triangle n'okpuru Mbupụ na bọtịnụ. A ndọpụta ndepụta abịa si. Mgbe ahụ, nyefee họrọ songs gị iPod aka. (Gị iPod aka aha a ga-emere na ndọpụta ndepụta.) Ị nwere ike ịlele pasent nke music transfer usoro site na a na-enwe ọganihu mmanya. E wezụga, biko ekwe nkwa na gị iPod aka na iPod ịkpọgharịa ga-ejikọrọ tupu music transfer na dechara.
Ọ bụghị naanị na songs, na listi ọkpụkpọ na gị iPod ịkpọgharịa nwekwara ike depụtaghachiri gị iPod aka. Gaa Playlist button n'okpuru gị iPod ịkpọgharịa udi. Họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ. Site na ịpị abịazi nọdụ triangle n'okpuru Export ka button, ị ga-esi atọ nhọrọ. Họrọ mbupụ playlist gị iPod aka. (Gị iPod aka aha na-egosi na e nwere).
Chai, music e zigara gị iPod aka. Ugbu a, ị nwere ike ịlele ya. N'okpuru gị iPod aka udi, pịa Media> Egwu. Niile songs gụnyere dị ndị bụ nri n'ebe ahụ. Ma ọ bụ, pịa Playlist button na-elele dị listi ọkpụkpọ.
Olee otú Tinye music ka iPod kpochapụwo si PC na iTunes